Miresaka ny Finoany Ilay Mpitendry Mozika Klasika | Fanadinadinana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Khakasse Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Xhosa Zoloa Éwé
FANADINADINANA | ELDAR NEBOLSIN
Miresaka ny Finoany Ilay Mpitendry Mozika Klasika
Mpitendry piano malaza i Eldar Nebolsin avy any Ouzbékistan. Efa nanao fampisehoana imbetsaka izy, sady nisy orkesitra niaraka taminy. Anisan’izany ny tany Londres, Moscou, Saint-Pétersbourg, New York, Paris, Roma, Sydney, Tokyo, ary Vienne. Lehibe tany amin’ny Firaisana Sovietika izy, ka mbola kely dia efa tsy nino an’Andriamanitra. Niaiky anefa izy tatỳ aoriana fa tena nisy namorona ny olombelona. Nanontany azy momba ny talentany sy ny finoany ny Mifohaza!
Ahoana no nahaizanao mozika?
Samy mpitendry piano ny dada sy mamanay, ka vao dimy taona aho dia nampianarin’izy ireo. Nianatra tamin’ny sekoly fianarana mozika tany Tachkent koa aho.
Sarotra ve ny miara-mitendry amin’ny orkesitra?
Ie, satria tsy misy orkesitra mitovy mihitsy. Mety ho indray na indroa ihany koa no miaraka mamerina. Amiko anefa ilay mampifandrindra ny mozika tendrena amin’ny fihetsiky ny mpibaiko no tena sarotra. Toy ny zavamaneno ngezabe iray mantsy ny orkesitra ka ilay mpibaiko no “mitendry” azy. Hoatran’ny mpinamana roa miresaka ilay izy, ka tsy ilay iray foana no miteny.
Isaky ny inona ianao no manomana?
Isan’andro ary adiny telo fara fahakeliny, sady ianarako amin’ny an-tsipiriany ilay mozika fa tsy hoe eo amin’izay sarotra ihany. Alohan’ny hitendrena aza, dia dinihiko tsara ilay mozika manontolo. Mba hahaizako tsara an’ilay izy koa anefa, dia henoiko izay mozika hafa noforonin’ilay mpanakanto.
Hoatran’ny ahoana ny mpitendry mahay, aminao?
Tena ataony “mihira” mihitsy ilay piano. Ilana fahaizana be izany. Ny feon’olona na ny sodina mantsy no azo atao mihamafy. Fa ny piano kosa, rehefa misy naoty iray tendrena dia mihamalefaka foana iny avy eo. Ilay mpitendry àry no manao izay hitazonana ny hamafin’ilay feo. Ataony milantolanto tsara ny tanany, ary ampifanarahiny amin’izany koa ny tongony. Mila manitsaka an’ilay vy erỳ ambany ankavanana mantsy izy, raha tiany haharitra kokoa ilay naoty, na mba hisy angola kely ilay feo. Raha mahafolaka tsara an’izany ny mpitendry, dia vitan’ilay piano ny mamoaka feona sodina, na anjombona, na orkesitra iray manontolo mihitsy. Na feon’olona aza tafavoakany, sady io rahateo no feo tsara indrindra.
Hita mihitsy ianao hoe tena tia mozika e?
Ka amiko tsinona ny mozika no tena ahafahanao mamoaka ny fihetseham-ponao, rehefa tsy hainao ny hilazana azy amin’ny teny tsotra fotsiny.
Inona no nahatonga anao ho liana tamin’ny fivavahana?
Be dia be boky tao aminay, satria ny dadanay nitondra boky foana avy any Moscou. Nisy anankiray izay tena nahaliana ahy, satria nisy tantara ao amin’ny Baiboly, sady nanazava ny niandohan’izao tontolo izao sy ny tantaran’ny Israelita. Novakiko koa ilay boky hoe Azonao Atao ny Hiaina Mandrakizay ao Amin’ny Paradisa eto An-tany, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah. * Tiako ilay izy satria tsotra ny fomba anazavany ny Baiboly. Nentiko ilay izy ka novakiko imbetsaka, rehefa nianatra mozika tany Espaina aho tamin’ny 1991. Izay aho vao nahita fivavahana manana porofo mampiaiky sy mandresy lahatra, fa tsy hoe mampihetsi-po fotsiny.
Tena nahaliana ahy ilay fampanantenan’ny Baiboly hoe afaka ny hiaina mandrakizay eto an-tany ny olona. Mitombina mihitsy izany amiko! Mbola tsy tafaresaka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah aho, nefa tapa-kevitra fa raha vao mahita an-dry zareo dia hianatra Baiboly.
Ahoana no nahitanao Vavolombelon’i Jehovah?
Afaka andro vitsivitsy, dia nahita vehivavy roa nitondra Baiboly aho. Dia nieritreritra aho hoe: ‘Tsy ireto ve ilay mpitory resahin’ilay boky novakiko? Ry zareo mantsy mitory hoatran’ny Kristianina tamin’ny andron’ny Baiboly.’ Dia nianatra Baiboly aho. Efa manampy ny hafa hianatra momba ny Mpamorona koa aho izao.
Inona no nandresy lahatra anao hino ny Mpamorona?
Ny mozika ihany ka! Saika ny olon-drehetra no tia mozika, fa ny biby tsy mba afaka mankafy an’izany. Izy io koa mampita fihetseham-po, ohatra hoe faly, na te hanome toky, na te hanambitamby. Matetika isika no mihetsika ho azy rehefa mandre gadon-kira. Tsy mitombina mihitsy koa amiko hoe nivoatra miandalana ny olona, nefa lasa mahay mamorona sy mankafy mozika toy ny an-dry Mozart sy Beethoven. Matoa ny atidohantsika mahavita an’izany, dia satria nisy Mpamorona tena mahay nanao antsika. Isika anefa tsy hoe maty raha tsy misy mozika. Midika izany fa tena tia antsika ny Mpamorona, ka tiany hankafy mozika isika.
Nahoana ianao no mino fa avy amin’Andriamanitra ny Baiboly?
Amiko ny Baiboly hoatran’ny feon-kira niangalian’ny orkesitra mahay tsara, izay mampita hafatra manohina ny fon’ny olona eran-tany. Bokikely 66 nosoratan’ny lehilahy 40 teo ho eo anefa no ao amin’izy io, ary 1 600 taona tany ho any vao vita. Dia lasa ny saiko hoe ‘Iza no mahavita mandrindra an’izany orkesitra lehibe izany, ka mahatafavoaka boky tena kanto sy miavaka?’ Tsy misy afa-tsy Andriamanitra!
^ feh. 15 Ilay boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? indray izao no ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah. Hita ao amin’ny www.jw.org/mg izy io.
Hizara Hizara Miresaka ny Finoany Ilay Mpitendry Mozika Klasika